नेकपाको पोलिटब्यूरो गठन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन अन्तिम चरणमा , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेकपाको पोलिटब्यूरो गठन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन अन्तिम चरणमा
काठमाडौं। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पोलिटब्युरो गठनको अन्तिम तयारी गरेको छ। आगामी जेठ ३ गते पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजनको घोषणा गर्ने तयारी नेकपाले गरेको हो। गत ९ गते जिल्ला नेतृत्व घोषणा गरेको नेकपाले प्रदेश तहको नेतृत्व पनि टुंगो लगाइसकेको छ।